Connie Nielsen – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Nobody (2021) Unicode အက်ရှင်ကားကောင်းကောင်းနဲ့ john wick လိုကားတွေကြိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ကားကောင်းလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဟတ်ချ်မန်ဆဲလ်က အရင်တုန်းက အရပ်ဘက်အေဂျင်စီတွေမှာ လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်လိုမျိုး လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့လူတစ်ယောက်။ အခုတော့ မိန်းမရယ်၊ သားရယ်၊ သမီးရယ်နဲ့ သာမန်ဘဝတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဘဝကြီးက တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ ဘာမှမထူးခြားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးသုခလည်း ထင်သလောက်ကြီးမရှိတဲ့ ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာဘဝကြီးပေါ့။ တစ်နေ့တော့ သူ့တို့အိမ်ကို သူခိုး ၂ ယောက်ဝင်တာကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ဘဲ သူခိုးတွေလွတ်သွားတယ်။ ပြောရရင်တော့ သူကအရင်ဘဝကို ပြန်မရောက်လိုတဲ့အတွက် အကြမ်းအတမ်းကိုရှောင်တဲ့သဘောပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးကလည်းဝိုင်းအပြစ်တင်ကြတော့ စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာနေတုန်း ညဘက်ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ရမ်းကားတဲ့ လူငယ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင့်အီးထားတဲ့ လက်စွမ်းတွေကိုပြလိုက်တာပေါ့။ ကံဆိုးချင်တော့ အဲ့လူငယ်တွေထဲကတစ်ယောက်က ရုရှားဒုစရိုက်လောကသူဌေးတစ်ဦးရဲ့ ညီဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ ဒုစရိုက်သမားတွေလက်ကနေ သူ့မိသားစုကို ကာကွယ်ဖို့ကြိုစားရပါတော့တယ်။ အက်ရှင်ကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ မပျင်းရမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi အက္ရွင္ကားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ john wick လိုကားေတြႀကိဳက္တဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ကားေကာင္းေလးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဟတ္ခ်္မန္ဆဲလ္က အရင္တုန္းက အရပ္ဘက္ေအဂ်င္စီေတြမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေအးဂ်င့္လိုမ်ိဳး လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့လူတစ္ေယာက္။ အခုေတာ့ မိန္းမရယ္၊ သားရယ္၊ သမီးရယ္နဲ႔ ...
IMDB: 7.5/10 29655 votes
Zack Snyder’s Justice League (2021) Unicode ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Justice League အပြီး လေးနှစ်ကြာမှာထွက်ရှိ လာတဲ့ Zack Synder’s justice league ဆိုတဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ၂၀၁၇ တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Justice league ကို DC ပရိသတ်တွေ စိတ်ပျက်ခဲ့ရပေမယ့်အခုထွက်ရှိလာတဲ့ ကားကတော့ အရင်ပုံစံနဲ့ကွဲထွက်ပြီးခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ အရမ်းကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စူပါမန်းသေဆုံးပြီးနောက်မားသားဘောစ်ဟာ ပြန်လည်နိုးထလာပြီး ကမ္ဘာကြီးအန္တရာယ်ကျဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ် မားသားဘောက်စ်တွေအားလုံးပေါင်းစည်းသွားတဲ့အခါ ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးသွားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက် လင်းနို့လူသားကဦးဆောင်ပြီး စွမ်းအားရှင်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ Justice league ကိုတည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် DC ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့်ကားလေးဖြစ်လို့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦး Credit Review ဒီဇာတ်ကားက ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ခုတင္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Justice League အၿပီး ေလးႏွစ္ၾကာမွာထြက္ရွိ လာတဲ့ Zack Synder’s justice league ဆိုတဲ့ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ၂၀၁၇ တုန္းကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Justice league ကို DC ပရိသတ္ေတြ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရေပမယ့္အခုထြက္ရွိလာတဲ့ ကားကေတာ့ အရင္ပုံစံနဲ႔ကြဲထြက္ၿပီးခပ္ၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔ အရမ္းကိုၾကည့္လို႔ေကာင္းပါတယ္ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ စူပါမန္းေသဆုံးၿပီးေနာက္မားသားေဘာစ္ဟာ ...
IMDB: 8.4/10 116526 votes
Soldier (1998) Unicode ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ အနာဂါတ်ကိုမျှော်ကြည့်တတ်ပြီး ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ ကလေးငယ်တွေကို လူသတ်လက်နက်စစ်သားတွေအဖြစ် လေ့ကျင့်ပေးဖို့မွေးကင်းစအရွယ်မှာပဲရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်. . . အဲ့ဒီစစ်သားတွေထဲမှာမှ ဆာဂျင်တော့ဒ်(Kurt Russell)ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ပေးမှုတွေနဲ့ အတူ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ အတော်ဆုံး အကြမ်းအခံဆုံး နဲ့ တိုက်ပွဲတွေအလီလီ အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ စစ်သားဟောင်းကြီး တစ်ယောက်ပေါ့... တစ်နေ့တော့ သူတို့ရဲ့ အာကာသယာဉ်ကို အသစ်ရောက်လာတဲ့ Colonel Mekum(ကာနယ်မက်ကွန်)နဲ့ တော့ဒ်ရဲ့ ကပ္ပတိန်တို့ အကြွားပြိုင်ရာက တော့ဒ်တို့စစ်သားဟောင်းတွေနဲ့ ကာနယ်မက်ကွန်ရဲ့တပ်သားအသစ်တွေယှဉ်ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာ တော့ဒ်တို့ရှုံးသွားလို့အပြတ်ရှင်းပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ မသေပဲ အာကာသအမှိုက်စွန့်ယာဉ်ပေါ်တင်ပြီး အမှိုက်တွေနဲ့အတူ ယာဉ်ပေါ်ကနေ ပစ်ချခံခဲ့ရပါတော့တယ် အသက်မသေတဲ့ တော့ဒ်တစ်ယောက် ဟိုးနှစ်ပေါင်း12နှစ်ကျော်လောက်က ယာဉ်ပျက်ကျပြီး အမည်အသိဂြိုလ်တစ်ခုပေါ် သောင်တင်နေတဲ့ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေရဲ့ရွာကို ရောက်သွားခြင်းခြင်းဖြစ်တယ် သူနေမကောင်းဖြစ်နေချိန် မေတ္တာဂရုဏာတွေနဲ့ ထုံမွှန်းထားတဲ့ မိသားစုလေးတစ်ခုနဲ့ အတူနေခွင့်ရစဉ်မှာ တော့ဒ်တစ်ယောက် လူသားဆန်လာခဲ့ပါပြီ. . . ဘဝအသစ်မှာ ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ ကြမ်းပေ့ရမ်းပေ့စစ်သားကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ကို သနားဂရုဏာသက်စရာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ ဘာနဲ့တူသလဲ. ...
IMDB: 6.0/10 49,430 votes
Justice League (2017) Unicode DC Comics စူပါဟီးရိုးတွေဖြစ်တဲ့ Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman နဲ့ Cyborg တို့ တစုတစည်း ပါဝင်ထားတာမို့ ပရိသတ်တွေ တပျော်ကြီး ရှုစား ရာမှာပါ။ စူပါမန်း သေဆုံးပြီးနောက် တစ်ကမ္ဘာလုံးပူဆွေးဝမ်းနည်းနေ ချိန်မှာ စူပါဗီလိန် Steppenwolf နဲ့ သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါ Parade-mons တွေဟာ Mother Boxes တွေကို ရှာဖွေဖို့ ကမ္ဘာကိုပြန်လည်အခြေချခဲ့ပါတယ်။ Mother Box တွေရဲ့ သတင်းအစရဖို့ S.T.A.R Labs ရဲ့ ဝန်ထမ်းအတော်များများကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘီလျံနာတစ် ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘရုစ်ဝိန်း (Bat-man) က လူစွမ်းကောင်းတွေစု စည်းပြီး Justice League ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကာ Steppenwolf တို့ကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ လုပ်ပါတော့တယ်။ Steppen-wolf တို့ကလည်း Mother Box ရဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးပမ်းနေ ...
IMDB: 6.5/10 314,937 votes
Wonder Woman (2017) Unicode ပင်လယ်ပြင်ကျယ်ကြီးရဲ့တစ်နေရာမှာ အလွန်သာယာလှပသော ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းရှိတယ်။ ထိုကျွန်းနေလူသားတွေကတော့ ထိုကျွန်းလေးကို Themyscira လို့ခေါ်ကြတယ်။ ထူးဆန်းတာက ထိုကျွန်းလေးပေါ်ကို လူသူအရောက်အပေါက် မရှိပဲ တစ်ကျွန်းလုံးက ကြည့်ရတာ အေးချမ်းသာယာလွန်းတယ်။ ပိုပြီးထူးဆန်းတာက တစ်ကျွန်းလုံးမှာ ဖိုသတ္တဝါဆိုလို့တစ်ကောက်တစ်မြီးမှတောင် မတွေ့ရဘူး။သူတို့ဟာ ရှေးဂရိနတ်ဘုရားရှင်တွေ ဖန်ဆင်းခဲ့ကြတဲ့ စစ်ဘက်မှာ သာလွန်တဲ့ Amazonians အမျိုးသမီးတွေပဲ။ ထိုကျွန်းလေးပေါ်မှာ ကလေးဆိုလို့တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ ထိုကလေးမလေးက Hippolyta ဘုရင်မရဲ့သမီးတော်လေးဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းက တိုက်ရခိုက်ရတာကို စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်။ မိခင်ဖြစ်သူက ယခုလို သမီးကလေး တိုက်ရေးခိုက်ရေးအပေါ် စိတ်ဝင်စားတာကို မလိုလားဘူး။ (အမှန်တော့ သူ ယခုလို မလိုလားခဲ့တာလည်း အကြောင်းရှိလို့ပါ။) ဒါပေမဲ့ ကလေးမလေးရဲ့အဒေါ်ဖြစ်သူ စစ်သမီးကြီး Antiope ဆီမှာ သိုင်းပညာတွေ ခိုးသင်ခဲ့တယ်။ တားမြစ်နေတဲ့ကြားကတည်းက ယခုလို တိုက်ရေးခိုက်ရေးကို စိတ်ပါနေတဲ့ သမီးလေးကို တားမြစ်ချင်ပေမဲ့ ညီအစ်မဖြစ်သူ Antiope က တစ်နေ့မှာ ...
IMDB: 7.5/10 472,212 votes